Nin aan lugo dhan laheyn oo Wadankiisa u matalaya Orodada Olambikada Aduunka(Daawo Sawirkiisa) - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa dhawaan Dalka Ingiriiska la filayaa in ay ka furmaan Ciyaaraha Olembikada Aduunka kaa ay ka qeyb galayaan Wadamo badan oo Caalamka katirsan.
Arimaha layaabka leh ee kasoo kordhay Ciyaarahan ayaa ah mid kamid ah Wadamada ka qeyb galaya in ay usoo xusheen Ciyaaryahanka u matalaya Orodada nin aaa lugo laheyn oo ka go’an labada lugood.
Oscar Pistorius waa Nin South African ah waana nin ay ka go’anyihiin labadiisa lug balse waxa loo galiyay Birro lugo ahaan uu u isticmaalayo lana doonayo in uu orada kaga qeybgalo.
Oscar Pistorius waa 25-sano jir waxaana Maanta Dowlada South Africa ku dhawaaqday in uu uga qeyb gali doono una matali doono orodada Msaaafda gaareysa 400 oo mitir isagoona la baratami doona rag lixaadkooda qaba oo lugahooda ku ordaya.
Ninkan ayaan dhoor mar oo hore ka qeybgalay Orodo loo qabtay dadka aan lugaha laheyn ama lixaadkooda uusan dhameyn taa uu ka galay kaalimo muhiim ah ,balse hada waxaa laga dhoorayaa waxa uu tartanka kusoo kordhiyo.